2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (Adeegyada Abbaarada Kiimikada) Nambarka Diiwaanka 22536-61-4
Aqoonta caafimaadka > 2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (Adeegyada Abbaarada Kiimikada) Nambarka Diiwaanka 22536-61-4
08 / 18 / 2018Posted by: APICMOCategory: Aqoonta caafimaadka0 jecel yahay
Qaababka Jirka iyo Kiimikada 2-Chloro-5-methylpyrimidine
2- Chloro-5 methylpyrimidine waxay leedahay muuqaal budo ah oo cad oo huruud ah heerkulka qolka. Qaarkood waxay qeexi doonaan hooska midabka sida cadaan-cad. Ma laha ur iyo miisaanka molecular ee 128.56 Grams per mole. Qaaciddada kiimikada waxaa lagu qeexay sida C5H5CIN2 iyo Nidaamka Nidaamka Hirgelinta Nidaamka Hirgelinta Nidaamka Hirgelinta (SMILES) sida CC1 = CN = C (CL) N = C1. Xaruntu waxay leedahay barta barafeed ee u dhaxaysa 89-92 degrees centigrade, iyo dhibic karkaraya 239 .Dhammaan shahaadada 2 ee 750mm / hg. Xajku xoogaa yaraa ayaa biyaha lagu foori karaa. Waxaa caadi ahaan la soo saaraa oo loo iibiyaa sidii daaweyn dhexdhexaad ah oo leh qiimeyn celcelis ahaan (xajmiga) inta u dhaxaysa 97% iyo 98%, ugu hooseeya ee lagu xusay 95%. Cufnaanta hal xabbad oo ka mid ah 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) waa qiyaasta 1.169 ee mole kasta oo ku yaala 25 degrees centigrade. Cabbiraadda faafidda waa 45.68 KJ / mol iyo cadaadiska uumiga waxaa lagu qiyaasaa qiyaasta 0.0626 mmHg ee 25 heerka Celsius. Isbarbar dhignaanta guud ee loogu talagalay 2-chloro-5-methylprimidine waa: Pyrimidine, 2-Chloro-5-methylpyrimidine, 2-chloro-5-methyl- (8CI, 9Cl) iyo 5-methyl-2-chloropyrimidine.
Diyaarinta 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4)
2-chloro-5 methylpyrimidine ayaa lagu soo saari karaa iyadoo la isticmaalayo habab badan. Cilmi-baarista guud ee loogu talagalay diyaarinta waxay ahayd in la helo sida 25% ee badeecadda ka dhalata fal-celinta udhaxeysa oxoschloride fosfooraska iyo 3-methylpyridine 1-oxide. Si kastaba ha ahaatee, si aad u hesho dhalid xitaa ka sarreeya, 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) waxaa lagu diyaarin karaa iyadoo la falgalayo fosfooraska oxychloride leh 3-methylpyridine 1 - Oxide. Horumarinta waxaa ka mid ah qabashada fal-celinta oo leh asaas aasaasiga ah ee organic nitrogen ah iyo xajin (oo doorbidi kara dareeraha organic organic) dhammaantood lagu sameeyey heerar heerkul u dhexeeya -50 iyo + 50 heerka Celsius. Waxtarka xitaa ilaa 70% waxaa lagu heli karaa iyadoo la isticmaalayo habab kala duwan. Haysashada tusaalaha ah ee ka sarreeya 96% ayaa sidoo kale la diiwaangeliyay, inkastoo ay kuwani leeyihiin khasaare aan la xaqiijin in yar oo ay ku adkaato in la mariyo, samaynta fulinta, gaar ahaan qiyaasta ballaaran ee u dhow suurta galnimada. Xulashada habka loo doortay waxaa laga yaabaa in ay saameeyn ku yeelato xaddiga uu rabo inuu soo saaro oo uu fududaado kala soocida alaabta kale. Si kastaba ha ahaatee, waxay kuxirantahay isticmaalka ugu dambeyn ee badeecada, marwalba waad ogaan kartaa habka loo isticmaalo diyaarinta, ama dooro habka ku haboon ee aad jeclaan lahayd in aad isticmaasho haddii aad adigu diyaargarowdo.
Waa maxay dhabta ah ee Pyramidine?
Si fudud loo dhigo, waxay yihiin xayndaabyo aromatic leh Carab iyo Nitrogaraam oo ku jira lixda giraan ee xubinta ka ah. Giraantu waa mid deggan. Pyramidine derivatives, waxay leeyihiin muddo dheer hadda waxay door muhiim ah ka qaadatay hormarinta daawooyinka iyaga ama iyaga laftooda ama isku xirkooda kale. Waxaa loo isticmaalay, waxaana la sii isticmaalayaa daawooyin badan oo ay ka mid yihiin, laakiin aan ku xaddidneyn, daawooyinka lagu daaweynayo cadaadis dhiig oo sarreeya, dawada suuxdinta, daawada suuxinta, daawooyinka duumada ee xitaa iyo xitaa marka la soo saaro daawada HIV . Diiradeena diiradda maqaalkani waxay ku jirtaa 2-chloro-5 methylpyramidine iyo isticmaalkeeda sida dhexdhexaad ah
Isticmaalida iyo codsiyada 2- Chloro-5-methylpyramidine
Sida caadiga ah waxaa loo isticmaalaa qalab loo yaqaan "organic synthesis"; sida caadiga ah loo isticmaalo sida dhexdhexaadinta cayayaanka sida acetamiprid, imidacloprid, sida herbicide iyo sidoo kale bakteeriyada. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sida daawo dhexdhexaad ah, wakiil kaniiniga ah iyo dheecaan dabiici ah. 2- Chloro-5-methylpyramidine waxaa loo isticmaalay sameynta qalabka cusub ee neonicotinoid oo leh hargabka insecticidal. Isticmaalka kale ee Qalabka Agro ee wax soo saarka waxaa ka mid ah samaynta: Imidacloprid, Acetamiprid, Nitenpyram, NTN32693. Kuwani waxay leeyihiin waxtarka la xaqiijiyay ee beeraha degaanka iyo beeraha warshadaha si loo burburiyo cayayaanka khatarta ah miro, khudradda ama dalagga.
Maaddooyinka kiimikada kale ee 2-Chloro-5 methylpyramidine waxaa loo isticmaali karaa in lagu daro:
Kaydinta iyo Gaadiidka
2-Chloro-5 methylpyramidine waxaa loo yaqaanaa kiimikada xasilloon marka lagu kaydiyo shuruudaha lagu taliyey: Heerkulka qolka. Ha isku dayin inaad isticmaasho weelasha aluminium ama galvanikeysan, maadama ay dhismuhu ka jawaabi doonaan kuwan si ay u soo saaraan gaaska korontada kaas oo ugu dambeyntii samayn kara walxaha qarxa hawada. U hubso inaad kontaroolatid si joogta ah si aad u ogaatid oo aad u aragto wixii ku dhicid ama dillaaca hore.
Sababtoo ah xasillooni iyo dabeecad aan khatar ahayn, 2-chloro-5-methylpyramidine waxaa lagu qaadi karaa hawada ama badda. Waa wax aad u firfircoon oo leh qulqulada hydrogen, oxides carbon, iyo oxides nitrogen, sidaa daraadeed waxaa lagula talinayaa inay doortaan gaadiidka ama ikhtiyaarka kaydinta iyada oo aan la soo bandhigin mid ka mid ah xeryahooda. Kontaynarada waa in si adag loo xiraa, meel qallalan oo qoyan iyo meel hawo wanaagsan leh
Hawlgal ku haboon, Cabbitaannada Amniga, Bixinta iyo Tallaabooyinka Dagaalka Dabka
Had iyo jeer xiro qalabka ilaalinta sida qalabka gacmaha ee kiimikada leh iyo oogada amaanka markaad la macaamilaysid 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) si looga fogaado xiriirka indhaha ama maqaarka. Iska ilaali neefta, gaas ama gaas: Mar walba ku isticmaal meel bannaan oo hawo leh. Neefsasho joogto ah ayaa la xaqiijiyay in ay leedahay saameyn caafimaad oo xun. Sida had iyo jeer, ku dadaal inaad ku tababarto nadaafadda iyo ammaanka sanadka wanaagsan.
Si kastaba ha noqotee, Haddii ay dhacdo in wax liqo oo liqo: Afka ku dhaq biyo iyo la tasho dhakhtarka. Xaaladda neefsashada: Qofka ay saameeyeen hawo nadiif ah iyo haddii aysan neefsanayn, sii wad in uu maamulo nadiifinta macmalka, oo la tasho dhakhtar caafimaad. Si aad ula xiriirto maqaarka maqaarka ah, si deg deg ah ugu dhaq saabuun iyo biyo ugu yaraan shan iyo toban daqiiqadood oo ka saar dhar kasta ama kabo. 2-chloro-5-methylpyrimidine waxay gubi kartaa maqaarka ama waxay keeni kartaa xasaasiyad. Sii wad inaad la xiriirto dhakhtar caafimaad.
2-chloro-5-pyrimidine methyl waa in lagu tuuraa qashin khaas ah. Tani waxay tusineysaa in qorshaha gaarka ah ee loo baahan yahay in la dhejiyo, iyada oo la adeegsanayo shirkad ruqsad liisan leh oo la xiriirta hey'adda qashin-qashinka deegaankaaga si loo hubiyo in la waafajiyo sharciga qaranka iyo gobolka. Maadada waa in aan lagu sii deyn biyaha, iyo haddii ay dhacdo in ciid ah daadin, vermiculite ku rid weel daboolan oo si habboon u tuur.
Si aad u demiso dababka natiijada 2-Chloro-5-methylpyrimidine (22536-61-4) Dab-demiska ayaa isticmaali kara dabdemiyeyaasha qallalan ee kiimikada, Oxon (IV) oxide, xumbo badan ama dab-bakhti-khamri u adkaysta. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, waa in uu xiro qalabka dabka iyo qalabka neefsashada si loo yareeyo khatarta gubashada.
Marka la eego qiyaasaha xaddiga shaqaynta, 2-chloro-5-methylpyramid ma laha xaddidaadyo noocaas ah. Digniinta Guud sida kumbiyuutarrada kiimikada ee injineerada ayaa lagu talinayaa inta lagu jiro waxqabadka.
Previous post Previous: Alex Rodriges
Next post Next: Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad ka ogaato xeryaha spiro